Soo dejisan Mindomo 9.3.2 – Windows – Vessoft
WindowsXafiiska,Kuwa kaleQoraalada iyo Jadwalka,Software kaleMindomo
Qaybaha: Qoraalada iyo Jadwalka, Software kale
Bogga rasmiga ah: Mindomo
Mindomo – software ah ururka muuqaal ah fikirrada iyo fikrado gaar kuu ah. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan mawduucyada kala duwan ee maps fikradda oo waxaa lagu soo bandhigay by Khaanadaha midabka iyo la dhisay qaab-dhismeedka geedka kala duwan. Mindomo ku jira toolbar ku haboon si ay u abuuraan mawduucyada shaqsi ama sub-mawduucyada ee kaadhka xusuusta iyo iyaga xirmaan dulucda ugu weyn. Mindomo awood in lagu daro in noodes qaar ka mid ah qaab-dhismeedka: comments, qoraalada, images, files warbaahinta iyo xiriirka web kaas oo la furay in browser ah ka dhisay-in. Mindomo taageertaa .Wadashaqayntaas ee map maanka la server fog iyo tan siinayaa helaan in ay si dadka kale ee ah in la ogaado isbedel wadajir ah.
hab maamulka hawsha haboon
Customization ka mid ah qaab fikirka map-ka
toolbar dareen leh
.Wadashaqayntaas Ee map maan la server fog
Search for qalabka lagama maarmaanka ah in browser ka dhisay-in
Soo dejisan Mindomo
Isticmaalkani wuxuu u baahan yahay Adobe AIR si habboon u shaqeeya
Faallo ku saabsan Mindomo
Mindomo Xirfadaha la xiriira